Jenesis 50 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Josef liri Jekọb na Kenan (1-14)
Josef gwara ụmụnne ya ọzọ na ya agbagharala ha (15-21)
Ihe ndị mere ụbọchị ole na ole tupu Josef anwụọ (22-26)
Ihe Josef kwuru ka e mee ọkpụkpụ ya (25)
50 Josef wee dakwasị nna ya,+ bee ákwá ma susuo ya ọnụ. 2 Josef nyeziri ndị dibịa na-ejere ya ozi iwu ka ha gbasie ozu+ nna ya. N’ihi ya, ndị dibịa ahụ gbasiri ozu Izrel. 3 Ha ji ụbọchị iri anọ zuru ezu gbasie ya n’ihi na ọ bụ ụbọchị ole ha ji agbasi ozu. Ndị Ijipt nọkwa na-ebere ya ákwá ruo ụbọchị iri asaa. 4 Mgbe ha ruchaara ya uju, Josef gwara ndị na-ejere Fero ozi,* sị: “Ọ bụrụ na ihe m masịrị unu, zierenụ m Fero, sị: 5 ‘Nna m mere ka m ṅụọrọ ya iyi.+ Ọ sịrị m: “Anwụwala m.+ Ị ga-eli m n’ili+ m gwuru na Kenan.”+ Biko, ka m gaa lie nna m. M lichaa ya, mụ alọghachi.’” 6 Fero sịrị ya: “Gaa lie nna gị otú o mere ka ị ṅụọrọ ya iyi na ị ga-eme.”+ 7 Josef wee gawa ili nna ya. Ndị niile na-ejere Fero ozi, ndị isi+ na-eje ozi n’obí* ya, na ndị isi* niile e nwere n’Ijipt so Josef gaa. 8 Ndị ezinụlọ Josef niile na ụmụnne ya na ndị ezinụlọ nna ya sokwa gaa.+ Ọ bụ naanị ụmụntakịrị ha na ìgwè ewu na atụrụ ha na ìgwè ehi ha ka ha hapụrụ na Goshen. 9 Ndị na-agba ụgbọ ịnyịnya+ na ndị na-agba ịnyịnya sokwa ya gaa. Ndị gara dị nnọọ ọtụtụ. 10 Ha wee rute n’ebe a na-azọcha mkpụrụ nke dị n’Etad. Ọ dị ná mpaghara Osimiri Jọdan. Ha bere nnukwu ákwá n’ebe ahụ, Josef rukwaara nna ya uju ruo ụbọchị asaa. 11 Ndị Kenan, bụ́ ndị bi n’ala ahụ, hụrụ ka ha na-ebe ákwá n’ebe a na-azọcha mkpụrụ nke dị n’Etad, ha wee tie mkpu, sị: “Uju a ndị Ijipt na-eru abụghị obere uju!” Ọ bụ ya mere e ji kpọọ ebe ahụ Ebel-mizreyim.* Ọ dị ná mpaghara Osimiri Jọdan. 12 Ụmụ Jekọb wee mee kpọmkwem ihe ọ gwara ha.+ 13 Ha buuru ozu ya gaa Kenan ma lie ya n’ọgba dị n’ala dị na Mak-pila, n’ihu Mamri. Ọ bụ ala Ebreham zụrụ Ifrọn onye Het ka ọ bụrụ ebe ọ ga na-eli ozu.+ 14 Mgbe Josef lichara nna ya, ya na ụmụnne ya na ndị niile so ya gaa lie nna ya laghachiri Ijipt. 15 Mgbe ụmụnne Josef hụrụ na nna ha anọghịzi ndụ, ha sịrị: “O nwere ike ịbụ na Josef buuru anyị iwe n’obi, o nwekwara ike ịbụ na ọ ga-akwụ anyị ụgwọ ihe ọjọọ niile anyị mere ya.”+ 16 N’ihi ya, ha ziri Josef ozi, sị: “Nna gị nyere iwu tupu ya anwụọ, sị: 17 ‘Unu ga-agwa Josef, sị: “Biko, ana m arịọ gị ka ị gbaghara ụmụnne gị mmehie ha na ihe ọjọọ ha mere gị.”’ Ugbu a, biko, gbaghara ndị ohu Chineke nke nna gị mmehie ha.” Josef bewere ákwá mgbe ha gwara ya ihe a. 18 Ụmụnne ya wee bịa daara ya n’ala, sị ya: “Anyị bụ ndị ohu gị!”+ 19 Josef sịziri ha: “Unu atụla egwu. Ọ̀ bụ m bụ Chineke? 20 Ọ bụ eziokwu na unu bu n’obi ime m ihe ọjọọ,+ ma Chineke bu n’obi ime ka ọ ghọọ ihe ọma, ka o wee si otú a zọọ ọtụtụ ndị ndụ, otú ọ na-eme taa.+ 21 N’ihi ya, unu atụla egwu. M ga na-enye unu na ụmụntakịrị unu ihe oriri.”+ O si otú a kasie ha obi ma mee ka obi sie ha ike. 22 Josef na ndị ezinụlọ nna ya wee biri n’Ijipt. Josef dịrị ndụ otu narị afọ na iri (110). 23 Josef hụrụ ụmụ Ifrem na ụmụ ụmụ ya na ụmụ ụmụ ụmụ ya.+ Ọ hụkwara ụmụ Mekia,+ nwa Manase. Josef weere ha ka ụmụ ya.* 24 Mgbe e mechara, Josef sịrị ụmụnne ya: “Anwụwala m, ma Chineke ga-agbatara unu ọsọ enyemaka+ ma kpọpụta unu n’ala a. Ọ ga-akpọgakwa unu n’ala ọ ṅụụrụ Ebreham, Aịzik, na Jekọb iyi na ọ ga-enye ha.”+ 25 N’ihi ya, Josef mere ka ụmụ Izrel* ṅụọrọ ya iyi. Ọ sịrị ha: “Chineke ga-agbatara unu ọsọ enyemaka. Chịrịnụ ọkpụkpụ m mgbe unu na-apụ n’ebe a.”+ 26 Josef wee nwụọ mgbe ọ dị otu narị afọ na iri (110). Ha gbasiri ozu ya+ ma tinye ya n’igbe ozu n’Ijipt.
^ Ma ọ bụ “ndị ezinụlọ Fero.”
^ Ma ọ bụ “ndị bụ́ okenye n’ezinụlọ.”
^ Ma ọ bụ “ndị okenye.”
^ Ebel-mizreyim pụtara “Uju Ndị Ijipt Ruru.”
^ Na Hibru, “A mụrụ ha n’ikpere Josef.”